Vaovao - Navadiky ny mpamorona tanora ny ruffle hanomezana hery ny vehivavy
Avy: 15 septambra 2020 Fiona Sinclair Scott, CNN
Ny fandefasana marika lamaody dia sarotra. Ny fandefasana marika lamaody mandritra ny areti-mifindra manerantany dia tsy azo atao mihitsy.
Ho an'i Teniola "Tia" Adeola, ny fandaharam-potoany tao amin'ny fandaharam-panehoana New York Fashion Week dia iray volana mahery talohan'ny nisian'ny coronavirus vaovao ireo reniben'ny lamaody lehibe ary nampandohalika ny indostrian'ny lamaody manerantany.
Ny seho nataon'i Adeola tamin'ny volana febroary dia fotoana nanolorana azy marika eponymous vao natsangana amin'izao tontolo izao. Ny volavolany - tanora, mahaliana, marefo ary mikorontana - nisarika ny sain'ny mpanao gazety lamaody ary niantoka ny toetrany "iray hijerena".
(Anna Wintour sy Adeola ao amin'ny Teen Vogue dia mankalaza ny hetsika Next Generation amin'ny taona 2019 ao New York City.)
Andro vitsy taorian'ny fampisehoana, ny mpamorona tanora dia teo amin'ny avo ohabolana, nijanona nandritra ny telo alina talohan'ny nianjera tamin'ny farany.
Ary avy eo niova ny zava-drehetra. Nody tany an-tranon'ny fianakaviany tany Lagos, Nizeria i Adeola mba handroaka ny toerana fanidiana ratsy indrindra.
"Mangidy izany," hoy i Adeola, niverina tao amin'ny studio Manhattan azy izao. "Feno fankasitrahana sy fankasitrahana aho noho ny faha-quarantine ahy niaraka tamin'ny fianakaviako fa ny fiatrehako ny efitrano fandraisam-bahinako mankany amin'ny fizarana efitrano amin'ny rahavaviko… dia betsaka fotsiny izany."
Nandany ny volana voalohany izy tamin'ny fahatsapany fa toa tsy nahatanty tanteraka izy ary namela ny tenany halahelo. Saingy niverina niasa i Adeola. Rehefa nieritreritra ny nahatonga azy handeha indray izy, dia nilaza tsy nihambahamba: “Misolo tena ny taranaka hanova an'izao tontolo izao aho.”
(Akanjo noforonin'i Tia Adeola. Credit: Tia Adeola)
Miaraka amin'izany iraka izany ao an-tsaina dia niditra an-tsehatra indray izy, nijery sary hosodoko nandritra ny ora maro ary nifandray tamin'ny boky momba ny tantaram-piainany tany am-boalohany, izay nanome aingam-panahy andiana sarontava endrika mampiseho ireo ruffles sonia nataony.
Ny fangalaran'i Adeola dia valinteny fanoherana ireo boky tantara momba ny zavakanto nianarany voalohany tany an-tsekoly. Raha nitantara izany izy dia namakafaka ny akanjo espaniola tamin'ny taonjato faha-16 tamin'ny sary hosodoko kanto ny rakitsoratra nataony tamin'ny lisea. Tamin'ny alàlan'ny fikarohana nataony momba ireo sanganasa tamin'io vanim-potoana io dia nahatsikaritra izy fa tsy misy olona mainty misolo tena ny sary, raha tsy aseho ho andevo na vazivazy izy ireo. Na dia niraikitra taminy aza ity dia nilaza izy fa tsy manala ny zava-misy fa tsara tarehy ireo akanjo amin'ny sary ireo.
"Ny fomba nahaizan'ireo mpanakanto naka ny endriny, ny lamba, ny fitaovana niaraka tamin'ny tadiny dia tsy nampino ahy mihitsy," hoy izy. “Ary ruffles - nantsoina hoe 'ruff' tamin'izany fotoana izany izy ireo ary namboarina tamin'ny starch… Arakaraka ny haben'ny fivoaranao eo amin'ny fiarahamonina.”
Ny ruffles an'i Adeola dia manao zavatra hamerenana io ampahany amin'ny tantara io. Amin'ny fampiasany azy ireo amin'ny endriny manokana, napetrany teo am-pelatanan'ny vondrom-behivavy tanora sy isan-karazany ny herin'ny fanambarana. Ary ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina dia manana mpikambana miavaka: Gigi Hadid, Dua Lipa ary Lizzo dia samy nitafy ny lambany avokoa.
Ho an'ny olo-malaza ankoatr'izay, Adeola dia nanao teboka manodidina ny vehivavy azy. "Tsy hisy Tia raha tsy misy ireo vehivavy ao amin'ny fiarahamonina misy ahy izay manohana ahy sy manao izay hahatanteraka ny zavatra," hoy izy. “Mandeha amin'ny pejy Instagram an'ny marika ny olona ary mahita ireto sary mahafinaritra ireto izay tian'izy ireo, saingy tsy tsapan'izy ireo fa nisy mpanakanto fanaovana makiazy vehivavy, nisy vehivavy mpanao volom-bolo, nisy vehivavy mpaka sary, nisy vehivavy mpanampy azy. Ka tonga saina daholo ireo vehivavy ao amin'ny fiarahamoniko ireo rehefa manao ireto akanjo ireto aho. ”
Tsy hiseho mandritra ny Herinandron'ny lamaody any New York i Adeola amin'ity volana septambra ity, saingy miasa amin'ny sary mihetsika fohy izy hamoahana azy amin'ny fararano. Miaraka amin'ny olana ateraky ny areti-mandringana dia tsy voafaritra mazava tsara ho an'ny mpamorona ny làlana ho avy, saingy zavatra iray azo antoka: tapa-kevitra ny hanohy izy ary hamela ruffles eny amoron-dalana.